Ku dhawaad 50 Gabdho oo loo soo tababarayo Booliska Haramcad | KEYDMEDIA ONLINE
Ku dhawaad 50 Gabdho oo loo soo tababarayo Booliska Haramcad
Gabdhahii ugu badnaa oo ka tirsan Booliiska Haramcad ayaa maanta oo Isniin ah tababar loogu qaaday dalka Turkiga.
MUQDISHO - Galabnimadii Isniinta ayaa waxaa Garoonka Aadan Cadde ee Caasimadda laga dhoofiyay cutubkii ugu horeeyay ee Gabdho kamid noqonaya Ciidanka booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad, kuwaas oo tababar heer sare ah ku soo qaadanaya dalka Turkiga.
Gabdhahaan oo gaaraya 49 ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay oo iyagoo hal cutub ah ay dowladda tababar ugu dartay dalka dibadiisa, sida uu taliska Booliska u sheegay Saxaafadda.
Taliyaha Ciidanka booliska Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ka mid ahaa saraakiishii gabdhahaan ka sagootisay Garoonka Aadan Cadde ayaa sheegay in uu gabdhahaan ku diiragaliyay in ay noqdaan kuwii difaaci lahaa sharafta iyo nabad geliyada shacabka Soomaaliyeed
Taliye ku xigeenka Booliiska Zakiya Xuseen Axmed ayaa qeyb ka aheyd sagootinta gabdhaha " “Hadaa ka kala imaateen qabiilo ama guryo kala duwan, maanta dhamaantiin waxaa tihiin koox ka wada tirsan Haramcad".
Ciidanka gabdhahaan lagu biirinayo ee Haramcad ayaa haatan gaarayo illaa 900 oo askari, waxaana tababartay dowladda Turkiga.